Ankapobeny efitra fandroana: ny hery anaty no be fanantenana
Noho ny fitomboana haingana any Shina ny toekarena sy ny fanitarana ny tsena tinady, fantany ny fahadiovana avy any ivelany ihany koa ny marika niditra ny tsena ao an-toerana, ary efa nametraka ny zavatra hita ao amin'ny ao an-toerana farany avo-tsena. Manoloana ny any ivelany fifaninanana, Shina ny fahadiovana fantany orinasa tsy maintsy mitady fomba hafa mba manomboka mieritreritra mikasika ny fomba hamoronana ny lalan-kivoahana.
Ny fiakaran'ny vahiny nanafika ny fahadiovana fantany marika marika-pirenena
Manoloana ny krizy nitondra momba ny fifaninanana avy any ivelany ny fahadiovana fantany marika, ny iraisam-pirenena ny fahadiovana fantany marika tamin'ny voalohany-dia ambany tanàna any Shina dia nanomboka nahatsapa ny coolness ary dia nitodika ny sainy ho amin'ny faharoa sy fahatelo-tsena dia ambany. Ankoatra izany, izy ireo nanomboka mamolavola haingana mifanaraka barotra sy ny varotra paikady mba ho azo antoka fa ny andalana voalohany dia tsy very tsena, raha fanitarana ny tsena anjara ny faharoa sy ny fahatelo-tsena dia ambany.
Na izany aza, ny fitsipika sy ny fanaraha-maso ny politika ao Shina Real Estate tsena no nitarika ho amin'ny mitohy fampihenana ny avo-end tena toetrany toy ny raitra, ary ny tsy fisian'ny varotra avo-end barotra trano amin'ny voalohany sy ny faharoa-dia ambany tanàna, ka nisarika nidina ny farany avo-tsena fantany ny fahadiovana sy ny mahatonga azy hitakemotra. Amin'izao fotoana izao, an-trano an-trano malaza fanatsarana marika efa intercepted ny avo-tsena fantany ny fahadiovana farany, izay misy fiantraikany lehibe eo amin'ny iraisam-pirenena ny fahadiovana fantany marika.
Mandritra izany fotoana izany, ny fampandrosoana haingana an'i Shina ny fahadiovana fantany orinasa, dia efa nisy marika malaza toy ny an-trano sy Jiu Wrigley Mu. Maro avo-trano fandraisam-bahiny sy trano fandraisam-bahiny farany dia nanomboka hanipy hydrangea ny marika an-trano manara-penitra sy ny vidiny ambany. Ny marika fiakaran'ny-pirenena no voaroba ny toerana raiki-tampisaka ny iraisam-pirenena ny fahadiovana fantany marika.
Post fotoana: Jan-18-2019
Taizhou Langle fahadiovana Factory varotrao.
Consumer fitakiana mahay vaovao dia sou efitra fandroana ...
Araka ny manam-pahefana vohikala tranonkala fanadihadiana, fiarovana ny tontolo iainana, ny angovo sy ny faharanitan-tsaina fiarovana lasa ny ifantohan'ny mpanjifa 'ny saina amin'ny fantany ny fahadiovana ao anatin'ny roa taona, ary ny teboka ...
Ankapobeny efitra fandroana: ny hery anaty no optimi ...
Noho ny fitomboana haingana any Shina ny toekarena sy ny fanitarana ny tsena tinady, fantany ny fahadiovana avy any ivelany ihany koa ny marika niditra ny tsena ao an-toerana, ary efa nametraka ny zavatra hita ao amin'ny ao an-toerana farany avo-tsena. In ...
Ny efitra fandroana ny orinasa dia niraikitra tao ny ̶ ...
Inona no hoavin'ny orinasa fahadiovana Shina? Mazava ho azy, dia tena mamirapiratra. Satria tanàn-dehibe ao Shina ambaratonga Mandroso haingana, Shina isan'olona tokantrano fanjifàna Mitombo haingana. Therefo ...
Bathroom waistline nanaovana mandrava ny fitsipika ...
Amin'ny ankapobeny, haingon-trano iray ihany no ampiasaina andalana hanaovako ny mandan'ny ambonin'ny ny toerana, izay nanao fandaharana amin'ny toerana 0,8 ny 1 metatra avy amin'ny tany, antsoina koa hoe ny andilany tsipika. Ny toerana misy ny kapila tanimanga waistline fotsiny ihany ...